Umbhali weLibreboot uvikela uStallman njengoba abanye beqhubeka nokushiya kuFOSS | Kusuka kuLinux
Leah Rowe, Umsunguli we ukusatshalaliswa I-Libreboot nesishoshovu esivelele yamalungelo amancane, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule uphume wazovikela obala uRichard Stallman ekuhlaselweni kwakamuva yize kube nezingxabano ezedlule neFOSS Foundation neStallman.
ULeah Rowe ikholelwa ukuthi ukuzingelwa kwabahleliwe okuhlelekile kuhlelwe ngabantu abaphikisana nesoftware yamahhala Futhi ayiqondiswanga kuStallman uqobo, kodwa kuyo yonke inhlangano yokuhamba kwamahhala kanye ne-FSF ikakhulukazi.
Ngokusho kukaLeah, ubulungiswa bezenhlalo beqiniso yisimo sokuhlonishwa kumuntu, hhayi lapho bezama ukukuqeda ngenxa nje yezinkolelo zabo. Umlayezo uphinde waphikiswa Izimpikiswano zabagxeki ngobulili bukaStallman kanye ne-transphobia, besebenzisa ukuxhumana komuntu siqu, futhi baphakamisa ukuthi konke ukuhlaselwa kwakamuva kumane nje kuyimizamo yokungena nokulawula inhlangano ye-FSF engaphansi kokulawulwa yizinkampani ezinkulu, njengoba sekwenzekile nge-OSI kanye naku I-Linux Foundation.
Eminyakeni eyi-2 eyedlule, isigebengu esaziwayo somcabango uRichard M Stallman wamangalelwa ngamanga ngokuvikela ukwephulwa komkhankaso we-Orwellian smear, owahlelwa abezindaba abajwayelekile ngokuyalelwa abanikezeli besoftware abaphathelene. Iminyaka engama-36 ilwela inkululeko yakho yedijithali, ikhanseliwe. Wayenonya kakhulu waze wasula njengomengameli weFree Software Foundation. IFSF ayenzanga lutho ukumvikela noma ukumvikela. Noma kunjalo, ungayivikela!
NgoMashi 21, 2021, ibhodi labaqondisi beFSF labuyisela uRichard Stallman esikhundleni. Ukuphendula, abezindaba baqale umkhankaso omusha we-smear. Isikhalazo senziwa, sifuna ukuthi kususwe ngenkani i-RMS kanye nalo lonke ibhodi labaqondisi le-FSF. I-RMS isolwe ngokungeyiphutha nge-sexism, i-transphobia, ukukhubazeka, kanye nezinye izinto eziningi ezenzelwe ukumdicilela phansi. Ungalaleli noma yikuphi kwalokho. Amanothi nezindatshana zikaRichard Stallman zezombusazwe zidweba isithombe sendoda ekhankasele kanzima ukulwa nobandlululo ngazo zonke izindlela.
Ukuphendula, thina, ukunyakaza kwesoftware yamahhala, siqale ezethu izikhalazo. Sifuna i-RMS ihlale ehhovisi nokuthi i-FSF ime iqinile. Sicela i-FSF ivikele ukuhlonishwa kukaRichard Stallman nefa lakhe. URichard Stallman ungumuntu, onelungelo lakhe lenkululeko yokukhuluma lacindezelwa kakhulu. Kufanele sikhombise ukumeseka kwethu ku-FSF, ngokuzwakalayo nangokucacile.
Ngakolunye uhlangothi, abanye abasebenzi ababili bamemezele ukuthi bathathe umhlalaphansi kusuka ku-FOSS Foundation: UJohn Hsieh, IPhini Lomqondisi kanye noRuben Rodríguez, CTO. UJohn wajoyina isisekelo e2016 futhi ngaphambi kwalokho wayephethe izikhundla zobuholi ezinhlanganweni ezingenzi nzuzo zenhlalakahle yomphakathi nezinhlangano zobulungiswa bezenhlalo.
URuben, owaziwa kangcono njengomsunguli wokusatshalaliswa kweTrisquel, Waqashwa yiFree Software Foundation ngo-2015 njengomlawuli wezinhlelo, ngemuva kwalokho wathatha isikhundla sokuba yinhloko yezobuchwepheshe. Phambilini uJohn Sullivan, oyi-CEO yeFree Software Foundation, naye umemezele ukuthi usethathe umhlalaphansi kwiFree Software Foundation.
Esitatimendeni sabo ngokuhlanganyela, uSullivan, Shay noRodríguez bakhombise ukuthi bayaqhubeka nokukholelwa ekubalulekeni kwenhloso ye-STR Foundation futhi bakholelwa ukuthi iqembu elisha lizokwazi kangcono ukubhekana nezinguquko zokubusa ezihlongozwayo.
Ngokusho kwabo, isoftware yamahhala kanye ne-copyleft yizinkinga ezibucayi zesikhathi sethu futhi iFree Software Foundation kufanele iqhubeke nokuhola ukunyakaza komthombo ovulekile, okwenza kube umgomo ofanayo kubo bonke abasebenzi ukuqinisekisa ukuguquka okushelelayo nokusekela ukwenziwa kwesimanje okudingekayo kwezinqubo zesisekelo nokuphathwa.
Ngaphezu kwalokho, kungaphawulwa ukuthi inani lalabo abasayine le ncwadi bexhasa uStallman selivele lidlula amasiginesha angama-4600 kanti incwadi ebhekene noStallman yayisivele isayinwe ngabantu abangaphezu kuka-3000.
U-Aaron Bassett, phakathi kwezishoshovu ezilwa noStallman waqala ukukhuthaza ukungezwa okukhethekile ku-Chrome, okukhombisa uphawu olukhethekile ekuvulweni kwendawo yokugcina yamaGitHub, abathuthukisi basayine le ncwadi besekela uStallman.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Umbhali weLibreboot uvikela uStallman njengoba abanye beqhubeka nokushiya kwiFOSS